CHIZIVISO CHIKURU! | Utah Pride Center
musha » KUZIVISA KUKURU!
Mhoro UPC Shamwari!
Ndiri kufara kuzivisa kuti iyo Utah Pride Road Rally yakapihwa na Vechidiki Vemotokari Boka iri kudzoka muna Gumiguru.
Gadzirira mazana emotokari kudhonza Main Street, muSalt Lake City, segore rechipiri reUtah Pride Road Rally rinodzoka muna Gumiguru.
Joinha isu sezvatinoona Nyika Kuuya Kunze Zuva pa Svondo, Gumiguru 10th, nekushongedza mota dzedu, kuratidza kudada uye kudhonza main. Kubuda kunze kunogona kuve chimwe chezvinhu zvakaomesesa izvo LGBTQ + munhu anogona kuita. Nemashoko anoparadzanisa uye anovenga ngochani achiuya kubva kune rimwe guta, nyika, uye vatungamiriri vezvitendero nguva pfupi yadarika, iyo Utah Pride Center inovaona sehumwe humbowo hwekuti zviitiko zvakaita sePride Road Rally zvinodiwa kuti ubvise ruvengo nerudo, mutsa uye kusanganisa.
Isu kuUtah Pride Center tinoshanda kuchengetedza nekusimudzira manzwi enharaunda yeUtah yeNGBTQ +. Tinovimba kuti basa redu rinoponesa hupenyu rinonzwika zvakanyanya kunhengo dzemunharaunda medu, pane kutaura kweruvengo kwakagovaniswa nevanhu vanoona kufambira mberi mukubatanidzwa uye kuenzana sekutyisidzira hupenyu hwavo. Pride Road Rally mukana wekuratidza rudo rwedu nerutsigiro uye nekuudza nharaunda yakazara kuti isu tiripo, isu tiri pano, uye tinodada nezvatiri.
Pfungwa yePride Road Rally yakatanga gore rapfuura apo COVID-19 yakamanikidza iyo Utah Pride Center kudzima iyo yegore Pride Mutambo uye Parade. Mushure mekuona kushamisika kwekushanduka gore rapfuura, iyo Utah Pride Center yakafunga kuita iyo Pride Road Rally chiitiko chegore. Vanhu vanopfuura zviuru zviviri, mumotokari dzavo, mabhasikoro, marori, nemabhazi, vakauya paNational Coming Out Day muna2,000 uye tinotarisira kubuda kwakatokura muna 2020. nharaunda ine ino COVID-yakachengeteka chiitiko zvakare.
Chiitiko ichi hachingotibvumidze kuratidza kuzvikudza, asi chinounzawo mari inodiwa kwazvo yekuenderera mberi nemabasa anoponesa kuUtah Pride Center inosanganisira hutano hwepfungwa nehutano, dzidzo nedzidzo, nzvimbo yakachengeteka yenharaunda, zviwanikwa zvekudzivirira kuzviuraya, zvirongwa zvevakuru uye zvakawanda, zvimwe zvakawanda.
Rumwe ruzivo ruchaziviswa mumavhiki anotevera nezvekuti riini uye sei kutora chikamu. Zvakawanda segore rapfuura, tichava nevanhu vanosaina sezvikwata kana vanhu pane vedu Website Iyo Rally Rally ichave yakarongeka zvakafanana gore rapfuura pamwe nedzimwe shanduko diki sezvo isu tinotarisira kuti zviitwe zviri nani panguva ino.
Gadzirira bhasikoro rako, mota, rori kana sikuta kugadzirira uye kukuona pa Main Street!
Jonathan Foulk (iye / iye), Wepamberi CEO
ONA MAGORE EKUPEDZISIRA MUGWAGWA WEMAHARA!